नेप्से तीन अंकले घट्यो, तीन समुहले कमाए, पाँच समुहले गुुमाए – तालिकासहित
काठमाडौं, ४ माघ । नेप्सेको गिरावट आज पनि कायम रहेको छ । आज नेप्से तीन दसमलव पाँच अंकले घटेर १४ सय ६३ दसमलव चार अंकमा कायम रहेको छ । नेप्से सेन्सिटिभ पनि शुन्य दसमलव ६४ अंकले घटेर तीन सय १७ दसमलव ३४...
बन्दना पाठक नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त
काठमाडौ, माघ ३ । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लि. मा मिति २०७३ पौष १५ गते देखि लागु हुने गरी बैंकका नायब महाप्रबन्धक श्रीमती बन्दना पाठकलाई का.मु. महा–प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । उक्त मिति देखिन...
नेप्से ११ अंकले घट्यो, फाईनान्स बाहेक सबैले गुमाए
काठमाडौं, ३ माघ । नेप्से उच्च अंकले घटेपनि आज कारोवार रकम भने बढेको छ । नेप्से आज ११ दसमलव ६३ अंकले घटेर १४ सय ६६ दसमलव नौ अंकमा कायम रहेको छ । नेप्से सेन्सिटिभ पनि दुुई दसमलव सात अंकले घटेर तीन सय १...
ग्लोबल आइएमई बैंकलाई आस्वा प्रणालीको स्वीकृती
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट ग्लोबल आइएमई बैंकले आस्वा (एप्लिकेशन सपोर्टेड बाइ ब्लक्ड एमाउण्ट) प्रणालीको अनुमति प्राप्त गरेको छ । सार्वजनिक रुपमा निष्काशन गर्ने साधारण धितोपत्र (आइपिओ) तथा थप धि...
नेप्से दुुई अंकले घट्यो, बाँणिज्य बाहेक सबैले गुमाए – तालिकासहित
काठमाडौं, २ माघ । साताको पहिलो कारोवार दिन आईतबार ने नेप्से ऋणात्मक देखिएको छ । आज नेप्से दुई दसमलव १४ अंकले घटेर १४ सय ७७ दसमलव ७२ अंकमा कायम रहेको छ । नेप्से सेन्सिटिभ पनि शुन्य दसमल शुन्य नौ अंक...
गुहेश्वरी फाईनान्सको अध्यक्षमा श्रेष्ठ नियुक्त
कााठमाडौं, २ माघ । गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैकिङ एण्ड फाईनान्सको अध्यक्ष पदमा श्रीमान श्रेष्ठ नियुुक्त भएका छन् । बैंक सञ्चालक समितीको पुुस २८ गते बसेको सञ्चालक समितीको एक सय ७२ औं बैठकले श्रेष्ठलाई अध्...
सहकारीको बाल कार्यक्रम
भरतपुर । दीपज्योति सहकारीले आफ्नो २२ औ वार्षिकोत्सवको अवसरमा शनिबार आफ्ना बालबचतकर्ताबीच विविध प्रतियोगितात्मक बाल कार्यक्रम गरेको छ । कार्यक्रममा ११३ जना बालबचतकर्ता लाई उमेर समूहको आधारमा चार समू...
सानिमा र बागमतीको एकिकृत कारोबार शुरु
काठमाडौं, २९ पुस । सानिमा बैंक लिमिटेडले बागमती डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति पश्चात सानिमा बैंक लिमिटेडको नामबाट आजबाट एकिकृत कारोबार शुरु गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ । हरिवनमा आयोजित एक समारोह...